I-Deep Groove Ball Bearings Izingxenye Eziyinhloko - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Deep Groove Ball Bearings Izingxenye eziyinhloko
Amapayipi ama-deep groove yizingxenye ezisemqoka zomshini, umshini usebenza ngokuvumelana nezimo, ikakhulukazi kuncike kwikhwalithi ye-stainless steel groove ball bearings ukuqinisekisa ukuthi izinga lomhlangano kufanele liqonde indlela yokuxosha.
Okokuqala, i-groove ejulile ibhola eveza ukuxubha
1. Ukudonsa amabhola ebhodlela obujulile nokubhebhetheka phansi
Ukukhwabanisa kwebhola elijulile lokubhola ibhola ngokuvamile lilula, kulula ukulimaza kanye nobunzima. Uma usususa, qala ukususa izikrini zokulungisa kanye nezikhonkwane ezizungeze ama-bearings e-groove ball. I-positioning flange ye-deep groove ball bearings, i-non-stainless steel groove ibhola elibhekene nekhava elibhekene ne-groove ebhekene nesihlalo esiphathelene nesihlalo kufanele ihlukaniswe nokuqondiswa kokunakwa. Uma ususa amathayili, sebenzisa izinduku zethusi noma izinti ukuze umelane nensimbi emuva kokuphela kokuthwala, futhi uqaphele ukuvikelwa kwesendlalelo se-alloy. I-sleeve ye-sleeve kufanele isuswe noma ixiliswe ngokusebenzisa ithuluzi lokuhlanza, elingenakugodlwa ukuze ligweme ukuguquka nokulimaza ekuthwaleni.
2. I-Rolling deep groove ibhola eveza ukuxubha
Ngaphambi kokukhipha ama-bearings ebhodini elijulile, sicela uhlole ukucacisa indlela yokususwa, unake ukuthi ngabe idivayisi ye-axial yokubeka indawo. Lapho ususa amabhethri amakhulu ebhola e-shaft, amaphuzu amandla kufanele akhethwe ngaphakathi kwendandatho yangaphakathi yama-ball groove ebhodini elijulile;
, Amandla kufanele akhethwe emgodini ojulile ophethe ibhande langaphandle, amandla okubhubhisa ukuba abe yifomu, ukuvimbela ukuqhutshwa kwebhola elijulile lokubheja ibhola.
Okwesibili, ukufakwa kwama-ball groove ejulile
1. I-Sleeve Sliding Deep Groove Ball Bearings Ukufakwa
Ukufakwa ukuqinisekisa ukuthi i-shaft ne-deep groove ball bearings ephakathi kwegebe efanelekile ukuze lubisike ukwakhiwa kwefilimu yamafutha. Ama-bear groove ball bearings kanye nezimbobo zokuhlala kufanele zihlonywe ngokugcwele ukuqina okufanele ukuvimbela ukusebenza kwezingubo ezijulile zebhola ibhola ngokujikeleza kwe-shaft. Izidingo ezithile zilandelayo:
'ngaphambi kokuba ingcindezi ihlolwe ngaphambi kokuba ubukhulu be-groove ebhekene nezigqoko ezithwala izingxenye zihlangabezane nezidingo, noma zingenasici, futhi zisula ukungcola, izitsha zokugcoba, amafutha ahlanzekile futhi ahambisane nomzimba womgodi wamafutha .
â 'Ngokusho kwe-stainless steel groove ball bearings esimweni somzimba kanye nobukhulu obukhulu bebhola eliphethe ibhola, ekufakweni kwamathuluzi afanele.
'' imifino ejulile ibhola ibhethini kufanelekile, ukungahambisani nokungalingani kufanele kufakwe nge izikulubo noma izikhonkwane, futhi ukuhlola ububanzi buhambisana nezidingo, njenge-deformation, kufanele kulungiswe, ukusetshenziswa okujwayelekile kokugunda, ukuvuselela nokukhipha indlela I
2. Ukufakwa kweSliding Deep Groove Ball Bearings
'Ukuvula imvula ejulile i-ball bearingings kuthiwa iyakuthwala, ekufakweni kufanele kuhlanzwe ngaphambi kokuba i-oyela, i-tank i-oil, i-surface mating, ihlole i-groove ball ebhekene ne-pad emgodini wamafutha. Qaphela ukususa u-wax-proof proof emaceleni e-axle, ngeke usetshenziswe umlilo, ukuze ungadluli insimbi encibilikisiwe, kufanele ufake emanzini ashisayo noma ngamafutha ashisayo ngemuva kokucibilika kuhlanzekile.